Caalamka Online » Afar Sano kadib xafladii waxqabadka Dr. Gaas oo kusoo gabagabowday degmada Tukaraq oo Gacanta Puntland ka baxday
Afar Sano kadib xafladii waxqabadka Dr. Gaas oo kusoo gabagabowday degmada Tukaraq oo Gacanta Puntland ka baxday
January 10, 2018 - Written by Maxamad Cabdi - Edited byMaxamad Cabdi
8-da Janaayo 2018 waa maalintii uu xukunka Puntland hogaanka u qabtay Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas, caawana waxaa la dhowrayey munaasibad si weyn loo soo agaasimay oo Madxtooyadda Puntland lagu soo bandhigo waxqabadkii dowladda Dr. Gaas.
Madaxweynaha DFS Maxamed C/laahi Farmaajo oo ku sugan magaaladda Garoowe ayaa la sugayey in uu si waafi ah u dhegeysto barnaamijyadda Wax-qabad ee maamulka Dr. Gaas, laakiin arrintaas waxaa ka soo soka maray kadib markii 8-da Janaayo gelinkii hore ee maanta ay ciidamo maamulka Somaliland daacad u ah qabsadeen tuuladda Tuka Raq oo wax ka yar 20Km u jirta xarunta Maamulka Puntland ee Garoowe.
Tuuladda Tuka Raq ayaa waxay ka mid aheyd deegaamada fara ku tiriska ah ee maamulka Puntland ka xukumo gobolka Sool, waxayna ahyed Kastamka keliya ee gobolka Sool uu la wadaagay Puntland ee dhaqaale ka soo xeroodo.
Dr. Gaas Maxaa la gudboon.
Habeenka 8-da januray ah ma aha mid ku fiican in laga sheekeeyo taariikhdii 4-ta sanadood aheyd ee Dr. Gaas uu gobolkan soo maamulayey, waxaana la oran karaa waxaa taas isku fuuqsatay kadib markii ay gacanta Puntland ka baxday degmo aad u yar oo dhaqaale ka soo xeroon jirtay oo caasimadda Puntland-na kaabiga ku haysa.
Dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa ku doodaya in Dr. Gaas ay u furan tahay oo keliya in uu gacmaha la galo dagaal faraha looga gubtay oo u dhexeeya Puntland iyo Soomaaliland si uu isaga masaxo taariikhda foosha xun ee soo gabagabeysay mudadii 4-ta sanadood ee xukunka Puntland uu soo hayey.
Waxaa kaloo jirta aragti kale oo sheegaysa in Dr. Gaas uu maanta hal dhagax Laba shinbirood ku dili karo waa haddii uu xoreeyo tuulada Tuka Raq, Laascaanoodna dib ugu soo celiyo gacanta ciidamada Puntland.
Fursadahan ayaa la rumeysan yahay in uu uga faa’iideysan karo mar haddii Somaliland ay iyagu bilaabeen dagaal gaadmo ah isla markaasna ah mid gardaro ah.
Laakiin dadka arrimaha Milateriga falanqeeya ayaa rumeysan in Maamulka Somaliland ay si weyn isugu diyaariyeen dagaal dhameystiran oo ay xuduudaha ay rumeysan yihiin ku soo xayn daabtaan marka la eego goboladda Sanaag, Sool iyo Cayn, waxayan dhaqaale fara badan ku bixiyeen dhismaha ciidamada Milaterigooda.
Maamulka Puntland uma muuqan mid leh han fog sida kan somaliland ee gooni isutaaga ah, wuxuuna ku masquulsanaa legdinta uu kula jiray Dowladda Federaalka, taasina waxay meesha ka saartay diyaargarow dagaal deg deg ugu imaan kara.
Muuse Biixi Cabdi oo dhowaan loo doortay Madaxweynaha somaliland ayaa ahaa Jabhad ka tirsanaa ururkii SNM waxaana dad badan oo ka mucaaradka gudaha Somaliland ay ku dhaliileen in uu Somaliland gelin doono dagaal deg deg ah, waana kan hadda ka curtay tuuladda Tuka Raq ee u dhow magaalada Garoowe.
Rajada Dr. Gaas uu kalsoonida shacabkiisa kula soo noqon karo ayaa ah in uu galo dagaal ka dhan ah Somaliland ee ku qotoma sheegashada gobolka Sool ee Maamulka Puntland Dastuurkeeda ku yaal wuxuuna xiligii doorashadiisa meel fagaare ah uu ka yiri “Laascaanood Faataxa laguma qabsan, Faataxana laguma soo celin karo”
Dagalku ma yeelan karaa Weji ka duwan in Puntland guuleysato?
Haddii uu dagaal dhex maro Laba qolo waxaa caado ah in qolo ay ku guuleysato hadafkii ay dagaalka u gashay, Puntland waxay rabtaa in haddii dagaal bilowdo aysan soo jeesan ilaa ay qabsadaan magaaladda Laascaanood, laakiin, is weydii Somaliland maxay rabtaa?
Somaliland, waxay ku hanjabtaa in magaaladda Garoowe barxadeeda dagaalku ka onkodi doono haddii ay Puntland dagaal ka dhan ah ku soo qaado deegaamada Somaliland ee Gobolka Sool, maantana ciidamada Muuse Biixi waxay soo yuurarsadeen tuuladda Tuka Raq oo kaabiga u saaran magaalada Garoowe.
Isku soo wada duuboo, Afartii sanadood ee Madaxweyne Gaas uu dalka soo xukumayey ayaa ku soo iba beesha tuulo u dhow Madaxtooyada Puntland oo ciidamadii somaliland calankoodii ka mutaan, maxay tahay haddaba tallaabadda la gudboon Dr. Gaas?
Laba arrimood midkood ayaa dadku u arkaan in uu yeelo.
In uu is casilo oo kursiga baneeyo ama
In uu dagaal aan guushiisa la isku hubin gorada la galo.